“सचेत नभए फेरि लकडाउनको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ”– डा.भ्याण्डेलर, डब्लुएचओ, नेपाल प्रतिनिधि (अन्तर्वार्ता) – BRTNepal
बिआरटीनेपाल २०७७ साउन २२ गते ७:०२ मा प्रकाशित
नेपालमा पछिल्लो समय कोभिड–१९ संक्रमणको दर बढ्दो क्रममा देखिएको छ, यसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले कसरी हेरिरहेको छ ?
–नेपालमा कुनै समय यस्तो थियो, जतिबेला यहाँ देखिएका सबै संक्रमितहरू वैदेशिक रोजगारीबाट फर्र्किकएका कामदारहरू थिए, मूलतः भारतबाट फर्किएका व्यक्तिहरू । यी व्यक्तिहरूमध्ये धेरै संक्रमित थिए । शुरू शुरूमा नेपालमा रहेका संक्रमितहरू भारतबाट फर्र्किकएका थिए । नेपालमा आएपछि गरिएको परीक्षणमा उनीहरूको नतिजा पोजिटिभ देखिएको थियो । यी व्यक्तिहरूलाई आइसोलेसनमा पठाइयो, क्वारेन्टाइनमा राखियो, यिनै मुख्य संक्रमित थिए । पछिल्लो दुई महिनामा हामीले नेपालमा फर्कने व्यक्ति, आप्रवासीहरूको सङ्ख्यामा गिरावट आएको देखेका छौं । नेपाल फर्कने मानिसहरूको संख्यामा कमी आएको छ । त्यसैले, कोभिडका संक्रमितहरूको सङ्ख्यामा पनि कमी आएको हो ।
अहिले संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थालेको हामीले देखेका छौं । यसको अर्थ, गतहप्ता वा त्यसैको वरिपरि, संक्रमितहरूको संख्या पुनः बढ्न थालेको हो । यो अनपेक्षित भने होइन किनभने हामीले अहिलेसम्म देखेको भनेको आप्रवासीहरूमा देखिएको संक्रमण हो, उनीहरूमध्ये धेरैलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । संक्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा राखिएको थियो । त्यहाँसम्म त ठीकै थियो । तर भाइरस मेटिइसकेको थिएन र विस्तारै अन्य मानिसलाई पनि भाइरसले संक्रमण गर्न थाल्यो ।
–समुदायहरूमा भइरहेका घटनाहरूलाई हेर्दा केही हदसम्म संक्रमण फैलिएको हो, तर व्यापक रूपमा संक्रमण फैलिसकेको छ भनेर हामीले भन्नु हतारो हुन्छ । स्थानीय तहहरूमा, तपाईले भने जस्तै कही कतै यात्रा नगरेका व्यक्तिहरू पनि विस्तारै संक्रमित भइरहेका छन् । हामीले अझ गहिरिएर विश्लेषण गयोैँ भने, आफैँ यात्रा नगरेका तर यात्रा गरेका व्यक्तिहरूको नजिकको सम्पर्कमा आएका धेरै व्यक्तिहरू भेट्न सक्छौँ ।
हाल के भइरहेको छ, महामारी (इपिडियोमोलोजी) कसरी परिवर्तन भइरहेको छ अर्थात् विदेशबाट फर्किनेहरूको संख्यामाकमी आएसँगै संक्रमितहरूको विवरणमा कसरी परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामी सरकारसँग छलफल गरिरहेका छौं । संक्रमितहरूको संख्या घटेको छ । अब हामी अर्को चरणका लागि तयार हुनुपर्दछ किनभने संक्रमितहरूको संख्या बढ्नु साँच्चै जोखिमपूर्ण हुन्छ । हामीले सरकारसँग गरिरहेको छलफल यिनै विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।
–संक्रमितहरूको संख्या विस्तारैै बढ्दै गइरहेको हामीले देखिरहेका छौं र प्रेसले पनि यो विषय उठाइरहेको छ । उसो भए, हामीले के गर्न सक्छौं त ? हामीले पक्कै केही गर्न सक्छौँ भनेर हामीलाई थाहा छ । हामीले गर्न सक्ने भनेको दूरी कायम गर्ने हो । यो भाइरस यत्तिकै फैलिएको होइन । एक व्यक्ति संक्रमित भएपछि अर्को व्यक्ति संक्रमित हुनका लागि भाइरस सर्नुपर्दछ । यदि हामीबीच पर्याप्त दूरी भएमा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा भाइरस सर्नका लागि धेरै गाह्रो पर्दछ । हामीले अपनाउनुपर्ने भनेर सधैँ भनेर पनि नपुग्ने यो नै सबैभन्दा आधारभूत नियम हो । कुनै पसलमा कुनै सामान किन्दा होस् वा कतै बाहिर जाँदा होस् वा बसमा यात्रा गर्दा नै किन नहोस्, जहाँसुकै पनि तपाईँले यो नियमको अनुसरण गर्नुपर्दछ । आफू र अर्को जोकोही व्यक्तिबीच कम्तीमा १ मिटरको दूरी भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
साथै, लकडाउन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि विविधता रहेको छ । पूर्ण लकडाउन गर्ने कि आंशिक भन्ने विषयमा । के के कुरा चल्न दिने ?
मेरो विचारमा, हामीले लकडाउनबाट के कुरा हासिल गर्न खोजेका हौं भन्ने विषय निर्धारण गर्दा यी सबै निर्णयहरू उपर ध्यान दिनुपर्दछ । लकडाउन विकल्प त हुँदै होइन । सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउन शुरू गर्दै गर्दादेखि नै हामीले आवश्यक परेमा पुनः लकडाउन गर्ने विकल्प हुनुपर्दछ भनेर भन्दै आएका छौं । लकडाउन सम्बन्धी निर्णय लिनु एक गाह्रो काम हो ।